100-ka dugsi ee ugu sarreeya pre-med oo leh khidmadooda hadda 2022
September 26, 2021 Harrison Grace
100-ka dugsi ee pre-med-ka ugu sarreeya oo leh khidmaddooda hadda ayaa lagu qoray maqaalkan baloogga, Waxaa guud ahaan la ogyahay in dalal badan oo adduunka ah maanta, dugsiyada pre-med aysan ahayn iskuul caafimaad. Iyagu waa uun bilowga gelitaanka gelitaanka dugsiga caafimaadka.
“Pre-med” waa koorso u diyaarisa ardayga doonaya inuu noqdo dhakhtar ama dhakhtar. Waa koorso la qaato marka hore ka hor intaan la gelin iskuulka caafimaadka. 100-ka dugsi ee ugu sarreeya pre-med waxay ardayda u diyaariyaan wax aan la filayn (oo ah dugsiga caafimaadka).
Guud ahaan, gelitaanka dugsiga caafimaadka ma aha kaftan. Waa hawl -qabad maadaama ay ku kacayso dhaqaale ahaan, tacliin ahaan, xitaa maskax ahaan. Waxaa jira koorsooyin gaar ah oo ay tahay in ardaygu barto si uu si fiican ugu codsado dugsiga caafimaadka. Koorsooyinkan waxaa ka mid ah:
Dugsiga pre-med ee caadiga ah, koorsooyinkaan waxaa lagu bartaa simistarka semesterka oo leh tababar shaybaar oo degdeg ah. Waxay u kala horreeyaan sidan:
Bayoolaji - laba semester leh shaybaar.
Fiisikiska - laba semester oo shaybaar leh.
Chemistry -ga Guud - laba semester oo shaybaar leh.
Kiimikada Dabiiciga ah - laba semester oo shaybaar leh.
Biochemistry - hal simistar leh shaybaar.
Ingiriis - hal simistar leh shaybaar.
Xisaabta - hal simistar leh shaybaar.
Qiyaastii konton ka mid ah 100ka dugsi ee pre-med ee ugu sarreeya ayaa laga yaabaa inay doortaan inay ku daraan Cilmu-nafsiga iyo Tirakoobka koorsooyinka ay barteen ardayda pre-med-ka.
Marka laga reebo helitaanka aqoon qoto dheer iyo hanashada koorsooyinkan, waxay aad ugu caawin doonaan MCAT (Imtixaanka Ogolaanshaha Kuliyada Caafimaadka). Waa imtixaan ku saleysan kombiyuutar oo soconaya toddobo saacadood, kaas oo loo baahan doono inta lagu jiro arjiga iskuul caafimaad oo ay u hanqal taagayaan ardayda caafimaadka.
Maadooyinka qaarkood ee lagu imtixaanay imtixaanka MCAT aad ayay u weyn yihiin, waxay la mid yihiin liiska koorsada pre-med ee loo baahan yahay.
1 WAA MAXAY DUGSI KA HOR-DHEX AH?
2 FAA'IIDOOYINKA U TAGIDA MIDKASTA DUGSIGA DUGSIGA KA HOR 100
3 100-ka dugsi ee ugu sarreeya pre-med oo leh khidmaddooda hadda
WAA MAXAY DUGSI KA HOR-DHEX AH?
Pre-med waa eray qeexaya koorso afar sano ah oo kuleej ah oo uu qaato arday caafimaad doon ah ka hor inta uusan gelin iskuulka caafimaadka. Waa dugsi lagu barto koorsooyinka pre-med, haddii ay koorsooyinku u diyaariyaan hamiga caafimaad barashada dugsiga caafimaadka.
Koorsooyinka ugu fiican ee arday caafimaad doon ah uu qaadan karo waa koorsooyin sayniska la xiriira. Ma jiraan koorsooyin gaar ah oo lagu barto sida loo noqdo dhakhtar. Marka, koorso kasta oo ay qaadato kulliyad si loogu diyaariyo ardaydeeda dugsi caafimaad waxaa lagu magacaabaa “Pre-med” iskuulkaasina waa “pre-med school”.
FAA'IIDOOYINKA U TAGIDA MIDKASTA DUGSIGA DUGSIGA KA HOR 100
In kasta oo faa'iidooyin badan ay ku raaxaystaan ​​pre-med ardayda, faa'iidooyinka hoos lagu tilmaamay ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee koorsooyinka pre-med ay tahay in si dhab ah loo qaato iyadoo la rabo ardayda caafimaadka:
Adeegsiga aqoonta buugga xaaladaha nolosha dhabta ah
La -talinta waayo -aragnimada
Fursad inaad kula kulanto xirfadlayaal caafimaad
Fursad inaad kula kulanto tababarayaasha kale ee caafimaadka
Ka soo bax goobta caafimaadka
Qiimee noqoshada xirfadle caafimaad
Hel warqad qiimeyn iyo talooyin.
Adeegsiga aqoonta buugga xaaladaha nolosha dhabta ah:
Daawada waa codsi aqoonta laga helay Bayoolaji, Kimistar, Fiisigis, Xisaab xaaladaha dhabta ah. Sababta ugu weyn ee manhajka loogu darayo waayo-aragnimada shaybaarka waa in la muujiyo xaaladaha nolosha dhabta ah iyo sida loo daryeelo haddii ay soo baxaan.
Pre-med, marka la baro jirka bini-aadamka iyo shaqooyinkiisa shaybaarka iyada oo la adeegsanayo maydka, ayaa istaagi kara mar kasta si ay ugu muujiyaan meelo kala duwan wixii ay arkeen (ma aha oo kaliya bartay) ee ku saabsan jirka aadanaha.
La -talinta waayo -aragnimada:
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu kori karo waa iyada oo la -talinta. Markaad tagto mid ka mid ah 100-ka dugsi ee ugu sarreeya pre-med-ka, arday caafimaad doon ah wuxuu la xiriiri karaa xirfadle caafimaad oo wanaagsan wuxuuna ka baran karaa isaga ama iyada. Xirfadlaha caafimaadka (oo hadda ah lataliye) ayaa laga yaabaa inuu go'aansado inuu ardayga noocaas ah si qoto dheer u qaato.
Fursadda inaad la kulanto xirfadlayaal caafimaad:
Inaad tagto mid ka mid ah 100-ka dugsi ee ugu horreeya med-med-ka ayaa abuuraya helitaan fudud oo u dhexeeya ardayda caafimaadka doonaysa iyo xirfadlayaasha caafimaadka laftooda. Macallimiintani waxay baraan ardaydan oo iyagana wax badan ka bartay, waxaana laga yaabaa inay ka dib doortaan inay la xiriiraan si ay u helaan aqoon iyo tababar caafimaad oo wanaagsan.
Fursad inaad kula kulanto tababarayaasha kale ee caafimaadka:
Haa! Ardayda pre-med waxay la kulmaan carruurtooda. Waxay bartaan is -dhexgalka iyo isku xoqidda maskaxda Waxay si wadajir ah u xalliyaan xaaladaha gorfaynta iyo xeeladda. Iskuulada pre-med waxay kor u qaadaan xirfadaha isgaarsiinta ee u dhexeeya dhakhaatiirta doonaya.
Awood u lahaanshaha inuu ka dhex muuqdo goobta caafimaadka:
Iyaga oo wax ka barta xirfadlayaasha caafimaadka ee fasallada, oo ay weheliso waaya-aragnimada shaybaarka ee ay heleen, ardaydan pre-med-ku had iyo jeer way ka dhex muuqan karaan caafimaadka maxaa yeelay waxa lagu baro mid kasta oo ka mid ah 100-ka dugsi ee pre-med-ka ugu sarreeya ma noqon karto wax aan la taaban karin ardayda caafimaadka ayaa la barayaa.
Qiimee noqoshada xirfadle caafimaad:
Helitaanka aqoonta pre-med ee dugsi pre-med oo wanaagsan, ardayga caafimaadka ee rajaynaya ayaa is hubiya isaga oo isweydiiya naftiisa ama su'aalo gaar ah sida:
Ma xamili karaa tan?
Miyaan ku haboonahay inaan tan sameeyo?
Ma leeyahay aqoon qoto dheer oo ku saabsan waxa Daawada ku saabsan tahay? iyo wixii la mid ah.
Isaga ama iyada ayaa tan u sameeya si ay u ogaadaan haddii tani dhab ahaan tahay waxa isaga ama iyada ay rabto inay sameyso.
Hel warqad qiimeyn iyo talooyin:
Aadista dugsiga xannaanada kahor oo aad samayso wax kasta oo lagaa codsado inaad wax ka barato xagga barayaasha ayaa ah hal hab oo sahlan oo lagu kasban karo sumcad wanaagsan. Iyadoo lagu yaqaano helitaanka darajooyin wanaagsan iyo arday dadaal badan, ardayga pre-med wuxuu ku guulaystaa wadnaha macallimiintiisa, kuwaas oo iyaguna u qora warqado talo bixin iyo qiimeyn ah.
Rank Hay'adda Khidmadaha Hadda
1 Jaamacadda Harvard $ 66,284
2 Jaamacadda Cambridge £ 55,272
3 Machadka Teknolojiyada Massachusetts (MIT) 53,790 USD
4 Jaamacadda Oxford £ 24,750- £ 34,678
5 Stanford University $ 62,193
6 Jaamacada Yale $ 42,120
7 Jaamacadda California, Los Angeles (UCLA) $ 38,745
8 Jaamacadda Johns Hopkins $ 58,720
9 College Imperial London $ 9,250
10 Jaamacadda California, San Diego (UCSD) $ 14,679
11 Machadka Teknolojiyada California (Caltech) $ 54,570
12 Jaamacadda Toronto CA $ 54,900 ilaa CA $ 68,750
13 Jaamacadda McGill $ 11,351 in $ 13,248
14 Jaamacadda Duke $ 58,031
15 Jaamacadda Melbourne $ 39,168
16 Columbia University 61,788 USD
17 Jaamacadda California, San Francisco $ 69,612
18 Jaamacadda Qaranka ee Singapore (NUS) $ 24,600 in $ 28,800
19 University of Chicago $ 60,552
20 Jaamacadda Tokyo 535,800 JPY
21 Jaamacadda Pennsylvania 57,770 USD
22 University of Michigan $ 48,542
23 Cornell University $ 76,258
24 Jaamacadda Washington $ 40,086
25 UCL (University College London) US $ 14,130
26 Machadka Karolinska 540,000 (SEK)
27 Jaamacadda Rockefeller $ 46,170
28 Jaamacadda Edinburgh $ 24,831
29 Jaamacadda Sydney $ 46,000
30 King's College London (Jaamacadda London) $ 36,900
31 Jaamacadda British Columbia $ 23,460
32 Jaamacadda Manchester £ 9,250
33 Jaamacadda Queensland $ 45,000
34 Jaamacadda Wisconsin-Madison $ 10,725
35 Jaamacadda Boston 55,892 USD
36 Jaamacadda Monash US $ 13,050
37 Jaamacadda Texas MD Xarunta Anderson Cancer $ 22,928
38 Jaamacadda Kyoto $ 12,320
40 Jaamacadda Washington ee St. Louis 55,292 USD
41 Humboldt-Universität zu Berlin 1,173 USD
42 Jaamacadda Erasmus Rotterdam £ 24,000
43 Jaamacadda Leiden £ 7,138
44 Jaamacadda McMaster 5,966.4 CAD
45 Jaamacadda Hong Kong $ 21,669
46 Jaamacadda Qaranka ee Australia $ 313
47 Jaamacadda Helsinki 18,000 EUR
48 University of Bristol £ 9,250
49 Jaamacadda New York (NYU) 53,308 USD
50 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg $ 44,670
51 Jaamacadda Aarhus DKK 120,000
52 Baylor College of Medicine $ 49,246
53 Jaamacadda Brown 58,404 USD
54 Jaamacadda Cardiff $ 12,320
55 Dartmouth College 57,638 USD
56 Freie Universität Berlin US $ 24,400
57 Katholieke Universiteit Leuven 6000 euros
58 Iskuulka London ee Nadaafadda & Daawada Kulaylka 20,000 USD
59 Ludwig-Maximilians-Universität München 1000 USD
60 Jaamacadda Lund £ 130.00
61 Jaamacadda Netherlands 6,000 ilaa 20,000 euro
62 Mayo Medical School $ 11,432
63 Jaamacadda Qaranka Taiwan (NTU) USD 5,000
64 Northwestern University $ 66,588
65 Jaamacadda Osaka ¥ 538,800
66 Jaamacadda Pennsylvania State University $ 36,278
67 Purdue University $ 38,900
68 Queen Mary, Jaamacadda London (QMUL) £ 9,250
69 Technische Universität München £ 20,000
70 Jaamacadda Adelaide $ 33,000
71 Jaamacadda New South Wales £ 11,570
72 Jaamacadda Sheffield £ 9,250
73 Jaamacadda Western Australia $ 33,000
74 Trinity College Dublin 18,860 euros
75 Tufts University 58,578 USD
76 Universität Frankfurt am Main 26,000 Euros
77 Universität Freiburg € 8000
78 Jaamacadda Catholique de Louvain (UCL) € 853
79 University of Montreal US $ 6,463
80 Jaamacadda Aberdeen £ 19,700
81 Jaamacadda Alberta 20,395 CAD
82 Jaamacadda Amsterdam € 13,568
83 Jaamacadda Bath £ 9,250
84 University of California, Davis 14,253 USD
85 Jaamacadda California, Irvine 13,728 USD
86 Jaamacadda Kobanheegan € 17,000
87 Jaamacadda Dundee DKK 120,000
88 Jaamacadda Exeter £ 40,000
89 Jaamacadda Ghent 2,000 USD
90 Jaamacadda Glasgow 10,000 GBP
91 Jaamacadda Leeds 9250 GBP
92 University of Minnesota $ 31,616
93 Jaamacadda Otago NZ $ 32,000
94 Jaamacadda Pittsburgh $ 24,118
95 Jaamacadda Virginia 17,798 USD
96 Jaamacadda Zurich 2,200 EUR
97 Jaamacadda Uppsala £ 135,000
98 Jaamacadda Utrecht 4,588 euros
99 Jaamacadda Vanderbilt $ 52,780
100 VU Jaamacadda Amsterdam € 12,216
Waa maxay qaybta ugu fiican ee pre-med?
A: Ma jiro saynis gaar ah oo gaar ah ilaa iyo inta aad qaadanayso koorsooyinka loo baahan yahay sida ku qoran barnaamijka pre-med. Hoos waxaa ah kuwa ugu fiican sayniska ee la xiriira pre-med:
Biochemistry: Waxay isku daraysaa laba majors pre-med oo kala ah; Bayoolaji iyo Kimistar. Mowduucyo kala duwan oo ku saleysan darajooyinkan ayaa la bartaa. Mawduucyadan la bartay waxay daboolayaan in ka badan 46.1% MCAT sababta oo ah su'aalahooda badan.
Bayoolaji: Sababtoo ah Bayoolaji wuxuu ka hadlayaa barashada noolaha.
Qaar ka mid ah 100-ka dugsi ee ugu horreeya med-med-ka ayaa laga yaabaa inay doortaan inay si kala duwan u bartaan kimistariga iyo bayoolojiga, oo aysan ahayn bayoolaji. Tani waa sababta oo ah waxaa jira mowduucyo badan oo lagu daboolayo koorsadooda.
Waa maxay barnaamijyada pre-med ee leh heerarka aqbalaadda ugu sarreeya ee dugsiga caafimaadka?
A: Darajaynta barnaamijyada pre-med inta badan waxay ku saleysan yihiin arrimo gaar ah sida GPA, diyaarinta MCAT, daryeelka bukaanka, waayo-aragnimada, iyo waayo-aragnimada cilmi-baarista. Heerarka aqbalaadda barnaamijyada pre-med waa sida soo socota:
Keydka Galbeedka: 29%
Jaamacadda Washington ee Saint Louis: 14%
Kulliyadda Amherst: 11.3%
Jaamacadda Waqooyi Galbeed: 9.1%
Jaamacadda Bariiska: 8.7%
Jaamacadda Duke: 7.8%
Jaamacadda Pennsylvania: 7.7%
Jaamacadda Brown: 7.1%
Kulliyadda Harvard: 4.5%
Jaamacadda Stanford: 4.4%
Kulliyaddee ayaa leh barnaamijka pre-med ugu fiican?
A: Qodobo gaar ah waa in la tixgeliyaa ka hor inta aan la qaadin barnaamijka pre-med mid ka mid ah 100ka dugsi ee ka horeeya med-ka ugu sarreeya. Mid ka mid ah qodobbada ayaa ah iskuul wanaagsan oo bixiya barnaamijka pre-med. Hoos waxaa ku qoran liiska dugsiyada xannaanada kahor:
Jaamacadda Rice, iyo wixii la mid ah.
Ardayda wax ka barata mid ka mid ah jaamacadahaan waxay codsan karaan iskuul caafimaad.
Gebogebadii, barnaamijyada pre-med ee mid ka mid ah 100-ka dugsi ee ugu sarreeya pre-med waa in loo tixgeliyo ikhtiyaar u leh ardayda caafimaadka rajaynaysa, maadaama ay u diyaarin doonto dugsiga caafimaadka laftiisa.
Intee in le'eg ayay ku kacaysaa in wax lagu barto iskuulka caafimaadka ee Kariibiyaanka?
20 Shaqooyinka Caafimaadka ee ugu sareeya ee wax lagu barto iskuulaad yar
30 Dugsiyada Injineeriyada Biyomediga ugu Fiican
Post blog Barashada Hagaha Dibadda
Previous Post:10 Kulliyadaha ugu Fiican California ee Ganacsiga
Post Next:9 Dugsiyada Pre Med ee ugu Fiican California